दुष्कर्मको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स दुष्ट जादू विरुद्ध प्रार्थना अंक
आज हामी दुष्ट जादूको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दुहरूको साथ व्यवहार गर्ने छौं। जब तपाइँ एक हिज्जे सुन्नुहुन्छ दिमागमा के आउँछ? हिज्जे आसुरी जादू हो जुन एक राक्षसलाई बोलाउन प्रयोग गर्दछ वा एक व्यक्तिलाई मोहित पार्न। त्यहाँ हिज्जे र एक मन्त्र बीच कुनै स्पष्ट भिन्नता छ। ती दुबै आत्मिक भयावहता सिर्जना गर्नका लागि राक्षसी भनाइहरू हुन्। स्पेलहरू एक व्यक्तिको अस्तित्व राख्नको लागि खराब जादू हो, तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा वा उद्देश्यको बिरूद्ध कार्य गर्न बाध्य पार्छ।
कहिलेकाँही हिज्जे व्यक्तिमा सरापको रूपमा आउँदछन्। तिनीहरू राक्षसी भनाइहरू हुन् जसले कसैलाई श्राप दिन वा कसैलाई दासत्वमा राख्न प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि हिज्जे वा जादू को प्रभाव मा काम गरीरहेको छ, यस्तो व्यक्ति एक दुष्ट आत्मा द्वारा कब्जा हुनेछ कि तिनीहरूलाई आफ्नो इच्छा विपरीत हो कि कुरा गर्न बाध्य हुनेछ। तर परमेश्वर मानिसको जीवनको हरेक नराम्रा शब्दहरू तोड्नुहुनेछ। वर्षौंदेखि तपाईलाई रोक्ने हरेक दुष्ट जादू, यो येशूको नाममा बिग्रिनेछ।
याद गर्नुहोस् शास्त्रपदको पुस्तकमा भन्छ उत्पत्ति 12:3म तिमीलाई आशीर्वाद दिने मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनेछु अनि तिमीलाई सराप दिनेहरूलाई सराप दिनेछु। पृथ्वीमा सबै मानिसहरुलाई आशीर्वाद दिनेछु। परमेश्वरको शक्तिले तपाईंको मुखको विरुद्धमा निन्दा गर्ने कुनै पनि मुखको निन्दा गर्दछ.
के तपाईले आफू वरपर कसैलाई याद गर्नुभयो कि अचानक असलबाट खराबमा परिवर्तन हुन्छ धेरै चोटि यो तिनीहरूको इच्छा वा परिवर्तन गर्ने योजनाहरू हुँदैन। यो प्राय: दुष्ट मंत्रको एक अभिव्यक्ति हो कि तिनीहरूलाई बन्धक राख्ने भनिएको छ। किन तिनीहरू ज्ञान बिना कामहरू गर्नेछन्। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु, हरेक खराब जादू जसले तपाईंलाई एक स्थानमा समातेर राख्यो, तिनीहरू येशूको नाममा आज भाँचिएका छन्। म आज येशूको नाममा तपाईंको जीवनमा पूर्ण मुक्ति घोषणा गर्दछु।
यदि तपाईंले आफ्नो जीवनमा कुनै अनौंठो कुरा याद गर्नुभयो वा तपाईंको नजिकको कसैको जीवन, उनीहरूको लागि प्रार्थनाको वेदी उठाउन अझ उत्तम समय। ईश्वरले यस प्रार्थना मार्गदर्शनलाई दुष्ट जीवनबाट मुक्त गर्नका लागि आदेश दिनुहुन्छ जुन उनीहरूको जीवनलाई सताइरहेका छन्। जब तपाईं यो गाईड प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रभुका दूत पनि तपाईंसँग हुन सक्छन्, परमेश्वरको दाहिने हातले तपाईंको नाममा येशूका नाममा शत्रुको सबै हातहरू नष्ट पार्न सक्छ।
हे मेरो परमेश्वर, आज म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु मेरो जीवनको हरेक नराम्रा शब्दहरू मेटाउन। मेरो जीवन र गन्तव्यको साथ दुश्मनको प्रत्येक शैतानी जादू, म प्रार्थना गर्दछु कि पवित्र आत्माको आगो द्वारा, तपाईं येशूको नाममा तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। मेरो जीवनको विरुद्ध दुष्ट प्रेतहरू आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएको प्रत्येक खराब जादू, म सर्वोच्चको शक्तिले डिक्री गर्दछु, प्रभुले आज येशूको नाममा तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो।
हे परमेश्वर, हरेक आसुरी जादू मेरो स्वास्थ्यको विरुद्धमा छ र मलाई सदाको लागि बाँध्ने काममा परिणत गर्दछु। म आदेश दिन्छु कि प्रभुको आगोले येशूको नाउमा त्यस्ता मंत्रहरू जलाउनेछ। मेरो बुबाको घर वा आमाको घरका हरेक बलिया व्यक्तिले मेरो स्वास्थ्यलाई नराम्रो व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई येशूको नाममा मृत्युदण्ड दिनुहोस्। प्रभु, हरेक जिब्रोले मेरो जीवनमा खराब मन्त्र बोल्छ, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि त्यो जिबस येशूको नाममा काट्नु पर्छ।
हे प्रभु, हरेक वैवाहिक जीवन मेरो वैवाहिक जीवनको विरुद्ध छ। प्रत्येक घर बोलाउने शब्द जुन मेरो घर नष्ट गर्नु हो। यो लेखिएको छ, कसले बोलेको छ र यो कहिले आयो प्रभुको आज्ञा छैन? म पवित्र आत्माको आगोले आदेश दिन्छु, मेरो वैवाहिक जीवनको विरुद्ध बोल्ने हरेक जिब्रो आज येशूको नाममा काटिएको छ। म सर्वोच्चमा आगो लगाएर भन्दछु, प्रत्येक मानिस जसले मेरो जीवनसाथीको विरुद्धमा बोल्छ अनि म, प्रभु, येशूको नाममा उनीहरूलाई मार्नु पर्छ।
प्रभु येशू, म मेरो जीवन मा भनिएको छ कि असफलताको हरेक दुष्ट जादू विरुद्ध प्रार्थना गर्दछु। मेरो जीवनको विरुद्धमा बोलेका प्रत्येक शब्दले मलाई जीवनको हरेक प्रयासमा असफल तुल्याउँछ, म स्वर्गको शक्तिले यसलाई नष्ट गर्दछु। किनकि लेखिएको छ, कुनै कुरा भन र यो स्थिर हुनेछ। प्रभु, मेरो जीवनमा विफलता को हरेक जादू येशूको नाममा नष्ट भयो। अबदेखि, म येशूको नाममा उत्कृष्टताको अर्को आयाममा काम गर्न थाल्छु। मलाई तल ल्याउने हरेक प्रयास येशूको नाममा नष्ट भयो।
हे प्रभु, हरेक कुरो मेरो आत्मिक जीवनको बिरूद्ध जादू गर्दछु, म यसको विरुद्धमा पवित्र आत्माको शक्तिले आउँछु। मेरो आत्मिक जीवनलाई नपुंसक बनाउनको लागि बोलेको प्रत्येक शब्द, म आदेश दिन्छु कि यो येशूको नाममा नष्ट भएको छ। अबदेखि, म येशूको नाममा आध्यात्मिक प्रगति को अनुग्रह प्राप्त। म येशूको नाममा अब रोकिने छैन। म चिसो-रगतको प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुँ। मेरो प्रार्थना जीवनको वेदीमा आगोले येशूको नाममा जलाउनुपर्दछ।
प्रभु, म ती सबै खराब जादूहरू नष्ट गर्दछु जुन मेरा बालबालिकाको जीवनमा भनिन्छ तिनीहरूको भविष्यलाई नष्ट गर्न। किनकि यो लेखिएको छ, मेरा बालबालिका र म चिन्हहरू र चमत्कारहरू हौं। म येशूको नाममा तिनीहरूको गन्तव्यको बिरूद्धमा बोलेको हरेक शब्दको विरूद्ध आउँछु। तिनीहरू येशूको नाममा उनीहरूको जीवनको लागि परमेश्वरको उद्देश्य असफल हुनेछैनन्।
प्रभुको इन्साफलाई मेरो परिवारको प्रत्येक राक्षसमा लाग्छ र मेरो जीवनलाई खराब जादूले नष्ट पार्न खोज्छु। मलाई मा पत्र छ कि हरेक दुष्ट श्राप, म पवित्र भूत आगो तिनीहरूलाई नष्ट। म तिमीलाई आशीर्वाद दिने मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनेछु अनि तिमीलाई सराप दिनेहरूलाई सराप दिनेछु। पृथ्वीमा सबै मानिसहरुलाई आशीर्वाद दिनेछु। ”सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यी सबैकुराहरु भन्नुभयो। प्रत्येक मानिस जसले मलाई सराप्नको निम्ति ढोका खोल्यो उसलाई येशूको नाममा दोषी ठहराउनु पर्छ। म आदेश दिन्छु कि मृत्युको दूतले येशूको जीवनमा मेरो जीवन कष्ट भोग्ने प्रत्येक मानिसलाई आउँदछन्।
अघिल्लो लेखमादुष्ट त्याग विरुद्ध प्रार्थना अंक
अर्को लेखमादुष्कर्महरू विरुद्ध प्रार्थना अंक
२ territ क्षेत्रीय शक्तिको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्टहरू
दुष्ट घोषणालाई नष्ट गर्न शक्तिशाली घोषणा प्रार्थना
१०० पर्याप्त प्रार्थना पोइन्टहरू छन्